Umgangatho wokuveliswa kweglavu yeglavu - China i-PVC iiglavu zemveliso yeglavu yabavelisi, abaxhasi
Umgca wemveliso yeglavu yePVC yamkela indlela eqhubekayo yokuvelisa kunye nendlela yokuntywilisela ngokuthe ngqo, kunye nokuyilwa kwefilimu efanayo kunye nombala oqaqambileyo. Iimodeli ezahlukeneyo kunye neenkcukacha zinokuveliswa kwi-Intanethi ngaxeshanye. Ubude bomgca wemveliso ziimitha ezingama-60, iimitha ezingama-80 kunye neemitha ezili-100, njl., Ngokuzenzekelayo okuphezulu kunye nemveliso enkulu. Inokuqwalaselwa ngokonakaliswa okuzenzekelayo, kwaye ubude bomgca wemveliso bunokuyilwa kwaye bufakwe ngokungqinelana nendawo yemveliso yomthengi.
Iiglavu zePvc zisetyenziswa kakhulu kubomi bemihla ngemihla, kunye nefuthe lokhuselo lwempilo, ukusebenza kakuhle kokukhusela, ukhuseleko kunye nokungabinetyhefu, ukwamkelwa ngokusetyenziswa kwemveliso yokhuselo.Imveliso kumazwe athuthukileyo nakwimimandla inentengiso ebanzi. Iimveliso zahlulwe zaba ziigloves zomgubo (kwinkqubo, intwana yomgubo wengqolowa incamathele kumphezulu weiglavu ukugcina iiglavu zicocekile kwaye zigudile) kunye neiglavu ezingenampuphu (kwinkqubo, i-PU ephatha iarhente isetyenziselwa ukubuyisela umgubo wombona ukuze udlale indima efanayo Ukusuka kwinqanaba, kukho ikakhulu iiglavu zebakala lonyango kwiiglavu zebakala loshishino (ukwahlula isalathiso ubukhulu becala kubungakanani benqanaba leenaliti); Ukusuka kwimodeli yahlulwe yaba yi-XSSMLXL yandiswa, yandiswa, yandiswa njalo njalo. Iimveliso zipapashwa ikakhulu kwinqanaba lomgubo wezentengiso kunye nomgubo wenqanaba lokuncokola ugqirha we-SMLXL, ML njengeemveliso eziphambili.
Iiglavu zilahlwe ezimbaxa zinezibonelelo iiglavu zilahlwe kunye iiglavu PVC. Babhaptizwa kwimixube ekrwada. Uluhlu lwangaphakathi lweiglavu luthambile kwaye kulula ukunxiba. Iiglavu zinobuthathaka obungcono kunezi glavu ze-PVC kwaye ziphantsi kwexabiso. Uluhlu lwangaphandle lweglavu lunokulingana kokungqubana, kulula ukuyisebenzisa, kwaye lufikelela kumgangatho wokuguda kwangaphandle nangaphandle okuthe tye.
Ekuveliseni iiglavu, izinto eziphambili eziluhlaza kunye nezinto ezincedisayo zibekwa kwindawo yokuqala kwaye zixutywe kwinxalenye ethile yokwenza i-emulsion. Emva kokucoca ulwelo, ukucoca, kunye nokuma, umxube uthunyelwa kwitanki yokudipha kunye nempompo. Ngaphantsi kweemeko zemveliso yesiqhelo, ukubumba kwesandla kumgca wendibano kungena ngokuzenzekelayo kwitanki yokudibanisa, kwaye ukungunda kwesandla okuhambelana ne-emulsion kuphuma kwitanki yokudipha, kwaye ngokuqhubekayo ujikeleze ngelixa usenza i-emulsion umphezulu weyunifomu yokubumba yesandla kwaye wenze ukugqitha I-lotion yehle yehla. Ulwelo oluvuzayo lubuyela kwitanki yokuntywiliselwa kwitanki lokuqokelela. Emva kokuvuza i-emulsion egqithisileyo, ukungunda kwesandla kuhamba kwi-oveni kunye nomgca wemveliso. Ngaphantsi kwale meko, i-emulsion ekubunjweni kwesandla iyaphiliswa kwaye yenziwe. Isikhunta sesandla esiphuma ehovini sihamba kwiinkqubo ezinjengokupholisa kwendalo, crimping kunye nokubala.